Inona no atao hoe CVR? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny C	» CVR
CVR no fanafohezana ny Tovana mivadika.
Ny tahan'ny fiovam-po dia ny isan-jaton'ny mpampiasa nahita doka na antso ho amin'ny hetsika mifanohitra amin'ireo mpampiasa niova fo. Ny fiovam-po dia mety ho fisoratana anarana, fampidinana, na fividianana tena izy matetika. Ny tahan'ny fiovam-po dia metrika tena manan-danja amin'ny fandrefesana ny fampielezan-kevitra ara-barotra, ny fanentanana dokam-barotra ary ny fahombiazan'ny pejy fipetrahana.